Speeches – Page 2 – KZNCOGTA
Posted April 3, 2017 April 11, 2017 cogta_usrPosted in Speeches
Posted March 31, 2017 April 11, 2017 cogta_usrPosted in Speeches
AMAZWI KANGQONGQOSHE WEZOKUBUSA NGOKUBAMBISANA NEZINDABA ZOMDABU KWAZULU-NATALI, UMHLONISHWA UNOMUSA DUBE-NCUBE, EMBIZWENI KUMASIPALA WASE MADLANGENI
31 Januwari 2017
Mphakathi waseMadlangeni wonke;
Angibonge ngokuthola lelithuba lokuba sihlanganyele kanye nani lapha namuhla kulembizo, nokungenye ngenye yezindlela esizama ngayo siwu Hulumeni wenu, ukuthi sihlale-sihale, sixhumane nani uma kukhona isinqumo esikhulu esisithathile, nesinomthelela omkhulu kwinhlalakahle yenu.
Izimbizo-ke zenzeka ngaphansi kohlelo lukaHulumeni oluzichaza lona njengoba kusukela ngisho nasemandulo besazi njengabantu abangama-Afrika ukuthi kuyaye kuhlale- kuhlale bese kubizwa imbizo, lapho khona kuzodingidwa udaba oluthile ngenhloso yokuba kuhlanganiswe amakhanda ngenhloso yokuthola isisombululo enkingeni okungabe umphakathi noma isizwe sihlangabezane nayo..
Ngokwazi kwethu ubudlelwane bethu njengoHulumeni wenu buhle kakhulu okufakazedla lokhu ukuthi lendawo ayikhishiwe inyumbazane uma kuziwa ekwabiweni kwezinhlelo zentuthuko. Kukhona eningakukhomba okwenziwe uHulumeni nokunenze nikuthakasele ukuthi nani niyizakhamuzi zakuleli.
Ingqikithi yalembizo wukuba sizonazisa mphakathi ngokusemthethweni, ukuthi uHulumeni wesiFundazwe usuhambe- wahamba waze wafinyelela esinqumeni sokuthi athathe amandla lapha kuMasipala wenu. Lokhu kwenzeke ngesandla soMnyango wami egameni loHulumeni wesiFundazwe.
Okusenze-ke size sifinyelele kulesisinqumo, yingenxa yokuthi amaKhansela enawa khetha enze ukuthi kungabi nozinzo kuloMasipala. Lokhu sikusho ngoba besilokhu sibikelwa ngokulwa kwawo nokuholele ekutheni kwezinye izikhathi kuthathwe izinqumo ezingekho emthethweni. Phakathi kokunye kunabasebenzi abamiswa ngokungemthetho, abanye baqashwe kungalandelwe mthetho, nokube nomthelela omubi ekulethweni kwezidingo ngqangi kini mphakathi. Lokhu akwehlanga kahle neze kithi singuHulumeni nokupheqe ukuthi kubekhona esikwenzayo ukuvikela nina noMasipala.
Angazi kukangaki siwayala amaKhansela ukuthi ngaso sonke isikhathi, awahlale njalo ekhumbula ukuthi alapha emkhandlwini nje, athunywe inina mphakathi. Awayele lapha ukuyo feza izinjongo zawo kodwa ezomphakathi. Kodwa-ke kubukeka sengathi uma sikhuluma kungena ngapha kuphume ngapha. UHulumeni ngeke-ke ahlale esonge izandla inhlalakahle yomphakathi ibe iqhubeka ithunazeka. Okhethweni loHulumeni basekhaya naphuma ngobuningi benu ngenhloso yokuthi nivotele abantu abazo letha impilo engono kini. Anivotelanga ukuthi nihlupheke okukanye ukuthi amaKhansela eyolwa laphana noma athathe izinqumo ezingekho emthethweni.
Angishoke ukuthi sizame konke okusemandleni ukulekelela amaKhansela ukuthi kube nozinzo lapha, kodwa kwanhlanga zimuka nomoya. Ngikhuluma lapha ngamadoda emizi nomama bemizi kodwa abaziphathisa okwezingane zase nkulisa futhi nazo zingcono kakhulu ngoba uma uthi zithule umsindo ziyalalela. Lokhu kwaseMadlangeni angazi ngingakubiza ngani. Ngoba ngampela mangingabuza wonke lamaKhansela ukuthi ikuphi anakho okufakazela ukuthi bangabaholi abaqotho abawukhathalele umphakathi akekho namunye onganeqholo lokungikhombisa ngoba nanku uMasipala uyaqhuga.
Sibe sesibona-ke singuMnyango uCogta ukuthi impela isimo lesi sibeka inhlalo yenu mphakathi engcupheni kakhulu, nokuyilapho sibe sesibikela uNdunankulu ubaba uWillies Mchunu kanye nekhabhinethi yonke yakhe, nalapho kube sekuthathwa isinqumo sokuthi makubhekwe ukuthi umthetho-sisekelo wezwe lethu wona uthini-ke esimweni esifana nalesi.
Umthetho-sisekelo ke ngokwesigaba 139 (b), uyalela phakathi kokunye lapho uHulumeni wesiFundazwe usuzinelise khona ukuthi uzinzo alukho, sekunokuphazamiseka kokulethwa kwezidingo ngqangi, kuyodingeka ukuthi kungenelele. UMnyango lona wethu, bese kuba yiwona othatha izintambo zokulawula ukusebenza kukaMasipala, emva kokubeka lokhu ezithebeni zeKhabhinethi.
Nebala uNdunankulu uMacingwane ube esekhipha umyalelo wokuthi kumele kulandelwe umthetho-sisekelo wezwe.
Kanti futhi sibe sesibikela nesakhiwo sephalamende likazwelonke esiwumkhandlu oyiso ekusebenzeni kwezifundazwe (iNational Council of Provinces), mayelana nalesisimo salapha kanye nangezincomo zokuba kungenelelwe.
Yingakho-ke ngilapha namuhla ukuthi sibe nenkundla efana nalena lapha sinazisa khona ngokusemthethweni, ningezwa nje kuphela kwabezindaba.
Angibike-ke ukuthi sesijube umlawuli oyiso likaNgqongqoshe nozozinza lapha. Uyena-ke ozothi alandele zonke izinsuku aqinisekisa ukuthi konke okumele kwenziwe nguMasipala ukusingatha izimpilo nenhlalo yabantu, ngempela kuyenziwa.
Mphathi wohlelo ukuba khona kwami lapha angisho ukuthi ngakolunye uhlangaothi angeneme neze ngoba lokhu kukhomba uhlobo lwamaKhansela esinawo emiphakathini yethu. Ngolwesihlanu lolu esiphuma kulo besinomhlangano omkhulu lapho simeme wonke amaKhansela ukuthi azozibophezela ohlelwenikazi lwethu lwe “Back to Basics” nesizama ngalo ukuguqula indlela yokusebenza koMasipala bethu, kuphuthume izinhlelo zentuthuko kubantu bakithi. Ngethula inkulumo yami, amaKhansela ngiwa donse ngendlebe ukuthi itshe logaya ngomunye umhlathi manje. Angeke sikubekezelele ukuthi kuzongabi nozinzo koMasipala ngenxa yawo besekuyathulakala nje. Sekuzoba khona ukukhala nokugedla kwamazinyo, angiphathi uma kuze kufinyelela ekutheni kulahleka imali yabakhokhi bentela. Imali soyithatha kuwo uqobo amaKhansela, akwazi lokho. Ngibatshelile ukuthi umkhandlu akusiyo indawo yokudlala, kodwa indawo lakhona kuhlanganiswa amakhanda ngenhloso yokuthi kuqhamukwe namasu okuletha impilo engcono kubantu bakithi. Asikwazi ukuthi abantu bakithi bohlupheka kusakhona uHulumeni wobandlululo, baphinde futhi bahlupheke sekuphethe uHulumeni wabo. Phinde angeke sikuvume lokho.
Ingakho ngininxusile nasekuqaleni ukuthi nathi siwumphakathi akesiwaphoyise amaKhansela esiwakhethile. Singabesabi ngoba uma sibesaba, intuthuko soyizwa ngendaba bona bebe beqhubeka bephila kahle nemindeni yabo. Ngithi angidlule kuloku ngoba kungiphatha kabi. Nami angithandi ukuthi ngolokhu ngaba nalezi mbizo ngibikela umphakathi ngezenzo ezimbi zabantu abadala abakhombisi ukuphusa komqondo nokubeka impilo yabantu abakhethile phambili.
Ngiyazi kunemfundisoze yokuthi uHulumeni yiwo owenza kube nezinkinga lapha. Lokhu akulona iqiniso. AmaKhansela eniwakhethile iwona kanye asidalela izinkinga. Ngiyafisa ukuthi futhi njengaba voti nezakhamuzi akenibe nesithangami nawo niwabuze ukuthi kusuke sekwenze njani ngampela ukuthi nithi niwathume okunye wona afike enze intando yawo.
Sizwile ngandlebenye ukuthi amanye amaKhansela anokwenza ngalemashi okuthiwa beyikhona lapha kukhonondwa ngesinqumo esisithathile. Lento siyathatha njengobuxoki ngoba abantu banele bahlulwe ukwenza abathunywe kona bese kuba lula ukukhomba umunwe kuHulumeni wesiFundazwe ukuthi iwona owenza kube nezinkinga kanti cha akunjalo. Ngiyacela kini nonke ukuthi ningabi ingxenye ya lama mashi ngoba kudlalwa ngani, kunalokho babizeni nibabuze ukuthi yini lento abayenza lapha emkhandlwini.
Ngakho-ke ngifisa ukusho ukuthi silindele ukuba njengezakhiwo zomphakathi nibambisane nalomlawuli oyiso likaNgqongqoshe esimthume lapha, ukuze konke okumele kwenzeke emphakathini kwenzeke ngempumelelo.
Ngiyacela ukuthi qikelelani ukuthi amakomidi amawadi ayaphila, yiwona phela ayizithangami ezisemqoka ukulalela izimvo zomphakathi bese zithathwa ziyiswa ebuholini bukaMasipala, nokungumnyango wethu-ke omele ubuholi bomkhandlu ngaphansi kwalesisimo esengisichazile.
Kuningi okunye okulindeleke ukuba kwenzeke kusuka manje koMasipala, nokuyizinto ebezizovele zijame nje zingenzeki lapha eMadlangeni ukuba asingenelelanga njengobuholi ezingeni lesiFundazwe.
Ngingabala ukuqalwa kwezinhlelo zokwakhiwa kwesabelo mali esizophasiswa maphakathi nonyaka ozayo;
Ngethemba ukuthi mkhulu umsebenzi owenziwayo ukuba kuxhunyanwe nomphakathi ngenhloso yokuba kubhekwe ukuthi osomqulu wentuthuko edidiyelwe phecelezi I Integrated Development Plan, ngakube asahambisana na nezidingo zomphakathi;
Kumele futhi kwakhiwe amakomidi omasipala asemqoka, njengalawo abhekelele ukuphathwa ngendlela kwezimali (Municipal Public Accounts Committee);
Kumele futhi kuqinisekiswe ukuthi bakhona abaphathi abaphezulu njengo Menenja kaMasipala kanye noMgcinimafa. Nokunye okuningi.
Wonke lomsebenzi bekumele engabe usunethutshana uqaliwe, kepha ngenxa yokungabikho kozinzo lomsebenzi uphazamisekile.
Ngakho-ke ningezwa abantu benikhohlisa bethi yithi esidala kungabi nazinzo lapha. Kodwa ukungenelela kwesiFundazwe kube yinto nathi ebesingayilangazeleli kodwa esizithole siphoqeka ukuba siyenze, ngenxa yokukhathazekela izakhamuzi emazingeni aphansi. Kanti futhi akukhonto thina esiyizuzayo ngokungenelela kodwa sisuke sivikela abavoti nokuyibona abalindele ukulethwa kwezidingo kuloMasipala.
Ngiyathanda-ke nje mphathi wohlelo sengiphetha ukuba kafushane ngichaze ukuthi ukuba khona kwalolungenelelo kanye nokuphumelela kwalo, kuncike kakhulu ekubambisaneni phakathi kwesithunywa lesi sikaHulumeni, umphakathi kanye namakhansela.
Angikuveze futhi ukuthi lomkhandlu sowuqapha ngeso lokhozi. Uma kuqhubeka kungabibikho zinzo, uMthetho-Sisekelo uyalela ukuba iKhabhinethi bese yenyusa izinga lokungenelela, ngokuthi ivele iwuhlakaze umkhandlu bese iphinde inikeza ithuba umphakathi ukuba ukhethe kabusha amakhansela okhethweni oluyoba yisipesheli.
Asilindele-ke ukuba size sifinyelele kuleloqophelo lokuhlakaza uMasipala, ngakho sinethemba elikhulu lokuthi sonke sizobambisana kuze kuba isimo sibubyela kwesijwayelekile.
Siyakhuleka naseMakhosini aseNdlunkulu ukuthi asondele, ngoba uholo lawo lubalulkile kakhulu ikakhulukazi uma isimo sinjena. Ngaphandle kwao kulesiFundazwe asisoze saqhubekela phambili.
Posted March 30, 2017 April 11, 2017 cogta_usrPosted in Speeches
Posted March 28, 2017 April 11, 2017 cogta_usrPosted in Speeches
Posted March 23, 2017 April 11, 2017 cogta_usrPosted in Speeches
MKHANYAKUDE CABINET OSS SPEECH BY MEC DUBE-NCUBE
Posted February 1, 2017 April 11, 2017 cogta_usrPosted in Speeches
INKULUMO KANGQONGQOSHE WEZOKUBUSA NGOKUBAMBISANA NEZINDABA ZOMDABU UMHLONISHWA U NOMUSA DUBE- NCUBE KHATHI EVAKASHELE U WARD 01 WOMASIPALA WASE JOZINI NGAPHANSI KOMASIPALA WESIFUNDA UMKHANYAKUDE NGAPHANSI KOHLELO LUKA OPERATION SUKUMA SAKHE
Mphathi wohlelo ngokukhulu ukuzithoba, angikhuleke eNkosini yesizwe sakwaNgwenya le wardi engaphansi kwaso;
Ikhansela le wardi umfwethu u Nkosinathi Myeni;
Izinduna zenkosi okungabe zingaphakathi kwethu;
Abahlala kwi war room bonke;
Mphathi wohlelo, ngijabula kakhulu ukuthi uHulumeni wethu phinde futhi wenze esinye isikhathi sokuthi iKhabhinethi yonke, iphinde futhi izohlala kulengxenye yesiFundazwe sakithi. Lokhu, kukhombisa ngokusobala ukuthi uHulumeni wethu, ukuqonda kabanzi ukusalela emumva kwalesiFunda, uma kuziwa kwezentuthuko.
Bazokhumbula abaningi ukuthi uMkhanyakude wathathwa owayenguMongameli wakuleli, uThabo mBeki, njengoMasipala wesiFunda phecelezi presidential node. Nokusho ukuthi indawo empofu okufanele uHulumeni enze konke okusemandleni ukuthi imali eningi ibekwa eceleni ukuze ithuthukiswe lendawo.
UMongameli akagcinanga nje ngokuthi enze lesosimemezelo kodwa uHulumeni wesiFundazwe ugijime ngesivinini esikhulu ukuphuthumisa izinhlelo zentuthuko lapha. Izinhlelo lezi engiziqhenya kakhulu ngazo njengoba ezinye izinxenye zalesiFunda seziyaqala ukukhombisa umehluko. Ngakho-ke silapha futhi namuhla ukuthi siqhubeke senze umehluko ezimpilweni bantu bakithi balapha eMkhanyakude.
Bazongivumela abaninigi uma ngithi lesiFunda singezinye salezo ndawo esiFundazweni okwakuthiwa ikobantu. Nokuyizindawo lakhona oHulumeni baphimbilini, bengasebenzisanga ngisho isenti labakhokhi bentela, ukuguqula izimpilo zabantu kulendawo. Inselelo ebinkulu kakhulu nesenkulu namanje kulendawo ukuntuleka kwamanzi. Into lena uHulumeni wethu enza konke okusemandleni ukuthi wonke umuntu owakhele lesiFunda, akwazi ukuthi aphuze amanzi ahlanzekile.
Kulapha eMkhanyakude lakhona iningi labantu liqale ukuba nogesi njengoba sekuphethe loHulumeni wabo. Bakhona kulendawo abazalwa baze bashona ugesi bewugcina ukuwoba kobelungu. Ngendlela isimo esasisibi ngayo abantu bakithi abaningi babazi ukuthi vele njengbantu abamnyama, akufanele babe nalezidingo ngqangi zingezabe lungu. Kodwa uthe loHulumeni wethu mawuthatha izintambo zombuso kwavuleka ikhasi elisha ezimpilweni zabo.
Sise wardini lakhona kunezinkulisa ezingu 08 nokusijabulisa kakhulu ukuthi kuqala ngaloHulumeni ukuthi abantwana balapha sibe nezakhiwo lapho babunjwa khona besebancane. Siyajabula kakhulu ngomsebenzi owenziwa umnyango wethu wezokuThuthukiswa komphakathi kulezinkulisa nesethemba ukuthi ngokubambisana nomphakathi lukhulu abantwana bethu abazolizuza.
Kwezempilo nakuba singafinyelele lapho sifisa khona kodwa siyabonga ukuthi ukhona umtholampilo lakhona abantu bakithi abakwaziyo ukuthi banikele khona uma kungaphilekile. Ngokuqonda ukuthi umphakathi mningi futhi ngeke sakwazi ukuthi sakhe imtholampilo zonke izindawo, uHulumeni wethu wenze izinhlaka zokuthi kube nemitholampilo engomahamba nendlwana efika ngezikhathi ezithize evikini noma enyangeni, abantu bakithi bakwazi ukuthi basizakale. Selehlile ngempela izinga labantu obekuphoqa ukuthi umphakathi wonke uhambe amabanga amade ukuze ukwazi ukufinyelela kulezidingo ngqangi.
Siyajabula futhi ekutheni sibuyisile isithunzi kubantu bakithi obekuyaye kuphoqe ukuthi babambe imihlangano ngaphansi kwezihlahla ngoba amahholo engekho. Siyazi-ke ukuthi kule wardi akhiwe amahholo amabili nesethemba ukuthi umphakathi wonke uyakwazi ukuthi ufinyelele kuwona uwasebenzise ngokulingana. Siyanxusa ukuthi umphakathi usilekele ekutheni lezakhiwo ziphathiswe okwezikhali zamantungwa.
Sikuqonda kahle kamhlophe ukuthi balinganiselwa ku 30 % nje kuphela abantu bakithi okumanje bano gesi kulendawo. Sikhathazekile kakhulu ngesibalo eziphezulu sabantu bakithi abangakabi nawo ugesi . Umnyango wami nokuyiwona owengamele ukulethwa kwalesi dingo ngqangi usebenza ngokungenamkhawulo ukwenza isiqiniseko sokuthi enhla nasenzansi nalesiFundazwe sakithi abantu bonke banawo ugesi. Sikwenza lokhu ngoba sazi kabanzi ukuthi ukubakhona kukagesi akugcini nje kuphela ngokuthi abantu bakhanyise, kodwa futhi kuvula namathuba okuthuthuka ngakwezomnotho. Ingakho uHulumeni wethu ukuphakelwa kukagesi ukubeke eqhulwini. Sikhuluma nje isiFundazwe sonke singaphesu kuka 85% wabantu asebefakelwe ugesi. Lokhu kukhomba ngokusobala ukuthi nalapha kungekudala sobe sibheke ku 100%. Lokhu sikuthatha njengomsebenzi omkhulu esiwenzile uma ubheka lapho siphuma khona siyisiFundazwe nokungahlukene nokuthi loHulumeni kwafanele ukuthi uqale phansi kwa A. Ngakho socela emphakathini ukuthi usibekezelele, asinikhohliwe neze-neze.
Mphathi wohlelo uhulumeni wethu usebenza kanzima ukuthi abantu bakithi bakwazi ukuziphilisa ngokuthi uqhamuke nezinhlelo eziningi zokuxosha indlala. Phakathi kwezinye u hlelo olwengamelwe umnyango wami I Commmunity Works Programe(CWP) okumanje esiFundazweni, selwakhe amathuba omsebenzi evile ku 50 000. Ngikhuluma nje nale wardi ingezinye zezindawo ezihlomulile kuloluhlelo njengoba belinganiselwa ku 48 abantu bakithi asebekwazi ukuthi baxoshe ikati eziko ngaphansi kwaloluhlelo. Yebo siyazi ukuthi baningi abantu bakithi abangasebenzi ingakho senza konke okusemandleni ukuthi wonke umuntu uyalithola ithuba ikakhulukazi labo okubonakalayo ukuthi ngampela isimo asisihle. Ngakho siyacela ukuthi lemisebenzi siyihloniphe, ngemali esiyitholayo, asizame ukuthi siqhamuke namasu azokwazi ukusiphilisa isikhathi eside. Angishoke ukuthi senza konke okusemandleni ukuthi loluhlelo silukhulise kuhlomule abantu abaningi. Sikwenza lokhu nakuba uHulumeni wethu engaphansi kwengcindezi enkulu yokungabibikho kwezimali.
Mphathi wohlelo isomiso sesishiye omkhulu umonakalo kulesiFunda sase Mkhanyakude. Kufe wena nkomo wena mbuzi konakala nokunye okuningi abantu bakithi abaziphilisa ngakho. Lokhu kube nomthelela omkhulu kakhulu ezinhlelweni zamanzi nani enizaziyo, uHulumeni wethu azama ngazo ukuthi kuso sonke lesiFunda umuntu nomuntu aphuze amanzi ahlanzekile. Nakuba kunjalo njengoHulumeni onakekelayo senze izaba zokuthi lapho amanzi engekho khona sithumele ama water tankers, saphinda futhi samba nama bore holes. Yebo siyazi ukuthi umphakathi awunelisekile ngelokuthi izimoto zamanzi zibuye zingafike kwesinye isikhathi, uthole ukuthi amaboreholes awasakhiqizi manzi. Asikuqonde lokhu ukuthi phakathi kokunye kwenziwa ubukhulu besomiso esihlasele isiFundazwe sethu nezwe lonkana. Kodwa senza uphenyo lapho amaboreholes engasebenzi khona sibambisene noMasipala wesiFunda, kungekudala ukhona umehluko enizowubona.
Mphathi wohlelo wohlelo ngingapbala siphelelwe isikhathi izinto uHulumeni asezenzile lapha esikhathi esincane ethathe izintambo zombuso. Namuhla-ke asizile lapha ukuzothula izinkulumo ezinde. Phela usuku lolu lakhona umphakathi kufanele ukhulume nathi njengezisebenzi zawo ukuthi ikuphi lakufanele siphuthume khona. Thina okwethu ukuthi silalele umphakathi okhala ngakho, ebese senza izaba zokuthi sikulungisa kanjani ngesivinini, iqhubeke impilo yabantu bakithi iye phambili. Kuleliqophelo angibonge ithuba enginikwe lona, ebese ngideda inkundla ukunika umphakathi ithuba lokuthi uzwakalise ilaka lawo.
Ulwaluko festival speech by MEC Dube-Ncube
Posted January 6, 2017 April 11, 2017 cogta_usr1 CommentPosted in Speeches
INKULUMO KANGQONGQOSHE WEZOKUBUSA NGOKUBAMBISANA NEZINDABA ZOMDABU KWAZULU NATAL UMHLONISHWA U NOMUSA DUBE-NCUBE EMCIMBINI WOKWEMUKELWA KWAMA KWARA EMVA KOKUSOKWA KUMASIPALA WENDAWO WASE KOKSTAD
Ngokukhulu ukuzithoba angikhuleke eSilweni Samabandla esingaphakathi kwethu…Bayede;
Undunankulu ubaba u Willies Mchunu;
Ongqongqoshe bonke abakhona;
Usihlalo wendlu Yamakhosi Omdabu Inkosi Chiliza,
Imeya yomasipala wesiFunda I Harry Gwala umhlonishwa Undobe;
Izimeya zonke zomasipala bendawo ezikhona;
Ubuholi bekomidi leNdlondlo;
Umphakathi wonke wase Kokstad namaphethelo;
Namhlanje-ke usuku olubaluluke kakhulu esiFundazweni sethu njengoba silapha siphelezela Ongangentaba-zakhe sizogubha ukubuya kwama Krwala osuthwini. Okukhulu kakhulu ukuthi zonke lezinsizwa ezisencane zibuye ziphila njengoba sazi ukuthi kwezinye izindawo lesi kuba isikhathi sokulila omama bekhala bekhalela amadodana abo aselele ubuthongo baphakade.
Ukubuya kwabo bephila bekungeke kwenzeke Bayede ukube bekungasibona ubuhlakani nobuholi bakho obulokhu busikhanyisela njalo ikakhulukazi ezintweni ezithinta imvelaphi yethu abanye bethu abanolwazi olufishane kuzo. Sithi-ke uqhubeke njalo Bayede usihole ungakhathali, simbonge futhi nonkulunkulu ngokuthi ulokhu eqhubekile njalo nokukupha impilo ngoba yena uyazi ukuthi usemningi umsebenzi okusafanele uwenze esizweni sakho.
Sokhumbula sonke ukuthi ukuvuselelwa kwesiko lokusokwa kwethulwe ngokusemthethweni ngonyaka ka 2014 kwephezulu. Lapha uhulumeni wethu wawulandela umyalelo weMbube wokuthi libuye lelisiko esizweni samaZulu noma esifundazweni.
Isilo sagcizelela kakhulu ukuthi uma lelisiko livuselelwa, phakathi kokunye kofanele kube neqhaza elikhulu elibanjwa uMnyango wethu Wezempilo oholwa uDinangwe. Sizokhumbula futhi ukuthi Isilo besingeneme neze ngezigameko lakhona abanye baba ntwana bethu bengabuyi bephila ekwalukeni. INgonyama yakubeka ngokusobala ukuthi zonke izinhlaka emphakathini kufanele zisebenze ngokubambisana ukugwema lesihlava. Lokhu kumbandakanya nezakhiwo ezikhona emphakathini ezibhekele amasiko ukuqinisekisa ukuthi onke amakhwara eSilo abuya esadla anhlamvana futhi ephilile.
Unomthebe wethu wabe usuyalela ukuthi lomcimbi akube umcimbi waminyaka yonke. Nembala njengohulumeni olalelayo salisabela ikhwela Longangezwe-lakhe ngoba phela INgonyama yase ikhulumile futhi-ke akekho namunye ongenza okuphambane nezwi Lezul- eliphezulu. Ingakho-ke silapha namuhla siphume ngothi lwethu ukuzoguba lolusuku.
Phakathi kwethu-ke ngiyazi kukhona abazali nabo abazogubha nathi. Siyazi ikakhulukazi omama bebelala bengalele becabanga amadodana abo asohlelweni lokhishwa ebafaneni angene ebudodeni. Yiwo lamadoda okuzothi emva kwalokhu akwazi ukubheka imindeni yawo ebese futhi ekwazi nokuthi afake isandla ekwakhiweni kwesizwe.
Lokhu ngikusho ngoba khathi abantwana belapha entabeni bafundiswa okuningi kakhulu abangeke bakufunda esikoleni. Bafundiswa phakathi kokunye ukuthi indoda yini, kulindelekeni kuyo kanti futhi kufanele iziphathe kanjani. Bayafundiswa futhi ukuthi abantu besifazane nezingane kufanele zivikelwe yibo akungabi ibona abazihlukumezayo. Lemfundiso ibalululekile kakhulu ngoba siyabona ukuthi kumanje izwe lethu libhekene nenkulu inkinga yokuhlukumezwa kwezingane ngokunjalo nabesifazane emiphakathini yethu. Bahlukumezwa ubani njalo? Yibo belu abesilisa abathandana nabo, ababaganile kwezinye izikhathi ababazalayo noma abazalwa nabo.
Ingakho-ke njalo ngihlale ngikuthakasela kakhulu ukuba khona kweSilo phakathi kwethu ngoba sona ezikhathini ezininigi, sihlale siphambili kwethu ngokucabanga. Sisifundisile ukuthi akusizo kuphela izinto zasentshonalanga ezizoxazulula izinkinga zethu, kodwa kofanele sibuyele amasikweni ethu naba namagalelo amakhulu ukwakha isizwe.
Phambilini kuyiqiniso elingephikwe ukuthi zazingadlangile kangaka izigameko zokuhlumezwa kwezingane nabesifazane. Kunalokho abesifazane babehlonishwa kakhulu kungekho sinqumo esithathwayo ekhaya omama bekhaya bengazi. Langiqonde khona isekutheni uma beya ngokuya banda abantwana bethu abathamela lezizikole zolwaluko, nginethemba mina lokuthi isithunzi sethu njengabantu bengabadi, sizobuya.
Akesibheke nje futhi enye yezinto esasingayinakile sonke ukuthi ibe negalelo elingakanani lokubuyisa isimilo ezinganeni zethu zamantombazane. Lapha ngikhuluma ngomkhosi womhlanga nawo obanjwa minyaka nothanyelwa izinkulungawane zamatshitshi, nokuyilapho zifike zishiye khona umhlanga komkhulu ukufakazela ukuthi ziseyizintombi nto. Lomcimbi ukhula minyaka yonke okufakazela ukuthi nabazali sebeyayibona lento Isilo esayibona kuqala. Phela futhi lapha akukho mtwana ophoqwayo kodwa iloyo naloyo mzali nengane bayazinqumela.
Kulomkhosi izingane zethu ziyagqugquzeleka kakhulu ukuthi ziziphathe kahle ngendlela okuyaye kube kuhle ngayo uma abantwana bekulomcimbi. Umtwana oyile uye afise ukuya futhi nangomuso. Siyazi ukuthi abantwana bethu bayaye bahlolwe nokubanikeza amathikithi okuthi baphathe umhlanga ngokukhulu ukuziqhenya bebheke Enyokeni, komkhulu. Konke lokhu kungenxa yoholo oluhle lweSilo sethu.
Omabili-ke lamasiko Isilo nohulumeni banethemba elikhulu ukuthi azosiza kakhulu ekutheni kuliwe nesifo senculaza, esazi sonke umonakalo esesiwenzile emiphakathini yethu. Siyazi ukuthi kunocwaningo lokuthi abesilisa abasokiwe kunamathuba angu 60 wamapehesenti okuthi angasuleleki ileligciwane lesandulela ngculaza. Kodwa kofanele sikugcizelele ukuthi lokhu akusho ukuthi uma usokiwe ngeke wasuleleka ngaleli gciwane. Ozizwa ukuthi ufuna ukuyocansini akasebenzise amajazi omkhwenyana uhulumeni wethu lo onakekelayo awanikezela mahhala kuyo yonke imitholampilo ekhona kweleMbube.
Bayede lona-ke akusiwo umcimbi wami, kodwa umcimbi weSilo nokuyisona okufanele sikhulume nabantu baso mayelana nokubaluleka kwawo. Okwami bekuwukusika nje elijikayo Zul-eliphezulu.
Kodwake sengihlala phansi ngicela ukuthatha lelithuba ngibonge kakhulu ekomidini leNdlondlo elinegaleleo elikhulu lokuthi lomsebenzi esihlangene ngawo namuhla uhamba njengoba Isilo sifisa.
Sibonge ukusebenza ngokubambisana kwabezempilo ngokunjalo nabalaphi bethu bomdabu ukuthi abantwana bethu babuye bephephile futhi bephilile.
Ngibonge futhi kakhulu koNgqongqoshe bonke abaminyango yabo ibenegalelo elikhulu lokhuthi ukuvuselelwa kwaleli siko kube impumelelo. Ngampela besingeke sibe lapha namuhla ukuzogubha ukubuya kwezingane zethu osuthwini.
Ngibonge futhi nakubazali ngokusethemba kwabo ngibangxenxe ukuthi baqaphele ngazozonke izikhathi ukuthi izingane azisiwa ezikoleni zokusoka ezingekho emthethweni noma ezingagunyaziwe uhulumeni. Ngikusho lokhu ngoba ezigamekweni eziningi zokudlula emhlabeni kwezingane zethu osuthwini, nokulahlekelwa ubudoda bazo, kuyatholakala ukuthi kwesinye isikhathi zisuke zisokwa abantu abangakulungele. Ngithi noma ngabe ubani onolwazi lwalabantu abangagunyaziwe ukusoka izingane zethu, abikele amaphoyisa ngokukhulu ukushesha kungaze kulahleke imiphefumulo.
Bayede angithathe lelithuba ngifisele iSilo nabantu baso unyaka omuhle nonezibusiso. Bese futhi ngibonga kakhulu kubantu beSilo nangendlela abaziphathe ngayo kulama holidi njengoba zingekho izigameko ezitheni ezimbi ezibe khona. Sibonge-ke futhi nakumdali ngokuba nomusa ekutheni singabi nokhisimuzi onezinhlekele njengoba kuyaye kwenzeke kweminye iminyaka.